Iindaba -Yintoni ekufuneka ihlawulwe xa usebenza kwiseti entsha yejenereyitha yedizili
Yintoni ekufuneka ihlawulwe xa usebenza kwiseti entsha yejenereyitha yedizili
Umvelisi wedizili omtsha, onke amalungu ngamalungu amatsha, kwaye umphezulu wokudanisa awukho kwimeko efanelekileyo. Ke ngoko, ukusebenza ngokusebenza (okwaziwa njengokusebenza ngokusebenza) kufuneka kwenziwe.
Ukubaleka kokusebenza kukwenza ukuba i-diesel generator iqhubeke ixesha elithile phantsi kwesantya esisezantsi kunye neemeko zomthwalo ophantsi, ukuze iqhubeke ngokuthe ngcembe phakathi kwayo yonke imiphezulu yokuhamba kokudibana kwejenereyitha yedizili kwaye ngokuthe ngcembe ifumane imeko efanelekileyo yokuthelekisa.
Ukusebenza ngokusebenza kubaluleke kakhulu kukuthembeka nakubomi bejenereta yedizili. Iinjini ezintsha nezihlaziyiweyo zomenzi wejenereyitha yedizili ziye zaqhutywa zaze zavavanywa ngaphambi kokuba zishiye umzi-mveliso, kungoko kungekho mfuneko yexesha elide zingalayishwa. Injini yedizili isasebenza kurhulumente ekuqaleni Inqanaba lokusetyenziswa. Ukwenza ukuba ukusebenza kweinjini entsha kubengcono kwaye kwandise ubomi benkonzo yayo, le miba ilandelayo kufuneka inikwe ingqalelo kusetyenziso lwenjini entsha.
1. Ngexesha lokuqala le-100h yokusebenza, umthwalo wenkonzo kufuneka ulawulwe ngaphakathi kwe-3/4 yamandla alinganisiweyo.
2. Kuphephe ukulala ixesha elide.
3. Nika ingqalelo esweni ukubeka iliso kutshintsho lweeparameter ezahlukeneyo zokusebenza.
4. Soloko ujonga ioyile kunye notshintsho kumgangatho weoyile. Ixesha lokutshintsha kweoyile kufuneka lifinyezwe kwintsebenzo yokuqala yokuthintela ukunxiba okunzulu okubangelwa ngamasuntswana esinyithi axutywe kwioyile. Ngokubanzi, ioyile kufuneka itshintshwe kube kanye emva kweeyure ezingama-50 zokusebenza kokuqala.
5. Xa iqondo lobushushu elisezantsi liphantsi kune-5 ℃, amanzi okupholisa kufuneka afudunyezwe ukwenza ubushushu bamanzi bonyuke ngaphezulu kwama-20 ℃ ngaphambi kokuqala.
Emva kokungena ngaphakathi, iseti yomvelisi iya kudibana nezi mfuno zilandelayo:
Iyunithi iya kuba nakho ukuqala ngokukhawuleza ngaphandle kwempazamo;
Iyunithi isebenza ngokuzinzileyo ngaphakathi komthwalo olinganisiweyo ngaphandle kwesantya esingalinganiyo kunye nesandi esingaqhelekanga;
Xa umthwalo utshintsha kabukhali, isantya sedizili sinokuzinziswa ngokukhawuleza. Ayibhabhi okanye ixhuma xa ikhawuleza. Xa isantya sicotha, i-injini ayizukuma kwaye isilinda ayisayi kuphuma kwinkonzo. Utshintsho phantsi kweemeko ezahlukeneyo zomthwalo kufuneka lube mpuluswa kwaye umbala womsi wokukhupha uqheleke;
Amaqondo okupholisa amanzi aqhelekile, umthwalo woxinzelelo lweoyile uyahlangabezana neemfuno, kwaye iqondo lobushushu lazo zonke izinto zokuthambisa ziqhelekile;
Akukho kuvuza kweoyile, ukuvuza kwamanzi, ukuvuza komoya kunye nokuvuza kombane.